फेसबुकमा राखेको फोटो शेयर गर्दै प्रकाशले फेरी लेखे सबैलाई रुवाउने यस्तो स्टाटस !
आफ्नी जिबन संगिनीलाई गुमाएर शो’कमा रहेका प्रकाशले निकै मार्मिक र भाबुक स्टाट्स लेखिरहेका छन । उनको जिबनमा रमिता प्रवेश गरे देखिका अनेक सम्झनलाइ उनले सामजिक संजालमा पोखिरहेका छन । प्रकाशको फेसबुक नियाल्दै गर्दा उनले रमितको यादमा लेखेका स्टाट्सबाट प्रस्ट हुन्छ की रमितालाई उनले कति माया गर्थे अनि रमिताले पनि कति माया गर्थिन भनेर । रमिताको दु:खद नि’धन भएपछी उनले लेखेको पहिलो स्टाटस यस्तो थियो -तेरो लागि रातो साडी ल्याइदिएको छु नि बूढी ! पर्सि हाम्रो बिहे हो, कहाँ गाछस् छिटो आइज न ।
मेरो एक चिम्टी सिन्दुरको लागि तैँले आफ्नो फ्यामिली, लाइफ सब छाडेर मेरो साथ दिइस्, तर मलाई बीचमै छोडेर किन गइस् भन् त । एक्लै यत्रो लामो बाटो कसरी हिँडु म हम् ? कति सपनाहरू थिए, तैँले किन धोका दिइस् । मैले भनेको होइन तलाईं केही हुनुभन्दा पहिला म नै नरहुँ भनेर, तँ अगाडि किन गइस् मलाई छाडेर ? म एक्लै के गरौं, कहाँ जाऊँ भन् त ? आइज न बिहे गरौंला नि ! यो बिहेको साडीमा मेरो सिन्दुर तेरो सिउँदोमा हेर्ने सपना छ मेरो । म नि छिट्टै आउँछु तँ सँगै बूढी, नभुलेस् है मेरो वेट गरेस् । चखेवाको जोडी जस्तै थियो नि हाम्रो माया अब एक गएपछि अर्को आफैँ आउँछु ।
त्यसपछी प्रकाशले जनवरी २४ सात बजेर २२ मा अर्को स्टाटस लेखेका छन । रमिता सहितको तस्बिर राखेर उनले लेखेका छन – तड्पाएर किन गैस छ’टपटीएर म’र्दैछु …कसरि सास फेर्नु गारो भैराछ । यति ठुलो संसारमा मा एक्लै कहाँ जाउ ।कति ठुलो सपना थियो मेरो हातको सिन्दुर लगाउने किन टुटाएर गैस । पागल भएर कसरि बसु पलपल तड्पिएर कैले सम्म बचुला मिस यु बुडी । यो स्टाट्सपछी उनले जनवरी २४ सात बजेर ३४ मिनेटमा अर्को स्त्ट्स लेखेका छन त्यहाँ पनि उनले रमितालाई धेरै याद गरेको बताएका छन ।
त्यस्तै प्रकाशले जनवरी २४ आठ बजेर १४ मिनेटमा जोडी परेवाको तस्बिर राख्दै यो खबर पुरैदेउ तिम्रै याद मा म’र्छु क्यारे भन्दै लेखेका छन । करिब १४ घण्टा अगाडी रमिताको तस्बिर राख्दै प्रकाशले अर्को स्टाटस लेख्दै भनेका छन – म छुटिमा आउदा बिहान मलाई उठाउथिस म १० मिनेट सुत्न दे भन्दा ब्लांकेट फालेर उठाउथिस अनि टि ल्याएर दिन्थिस मैले बिहान टि लिएर आइज भन्दा किन नल्येकी होस् । किन ब्युझिन्स आज मलाइ ? उनले भगावन संग समेत आक्रोस पोखेका छन । उनि अगी लेख्छन रोटि बनाउदा सानो हात डढयो भने ७ दिनसम्म हात ड’ढयो भनेर सुनाई राख्र्थी तर अज चि’तामा पुरै ज’ल्दा मलाई किन केहि पनि भनेन किन सुनाइन मलाइ दु’खिराछ भनेर ।
रमिताको यादमा बि’क्षिप्त बनेका प्रकाशले करिब ८ घण्टा अगाडी अर्को मार्मिक स्टाट्स लेखेका छन “बुडी कसरी भुलु तलाई यार छटपटी भइराको छ, सपनामा भएनी बोल न ! किन गइस मलाई छोडेर कसरी ब’च्ला भनेर मा का जाउ भन त। मलाइ छोडेर जान तलाई केहि भएन है ! त्यति माया गर्थिस छोडिस मलाई संगै बाच्छु म’र्छु भनेर भन्थिस त् त गइस मा कसरी औ भन त ? का जाउ यहाँ बाट एक्लै ? एक्लै छु बुढी कोइ छैन । म संग एक्ला एक्लै भौ’तारिएर कसरी बसु बुढी हम”।